Napoli oo Bareejo Gashay, Milan oo Laga Badiyay iyo Lazio oo Badisay – Radio Muqdisho
Napoli oo Bareejo Gashay, Milan oo Laga Badiyay iyo Lazio oo Badisay
Kooxda Napoli ayaa garoonkeeda San Paolo barbardhac 2-2 ah kula gashay kooxda Empoli.
Kooxda Empoli ayaa qeybtii hore ee ciyaarta la hor martay labada gool,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Simone Verdi iyo Daniele Rugani.
Kooxda Napoli ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta la timid labo gool oo barbardhac ah,waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Duvan Zapata iyo Jonathan De Guzman.
Kooxda Napoli ayaa u dhaadhacday kaalinta afaraad ee horyaalka talyaaniga,waxana ay leedahay 24-dhibcood,halka kooxda Empoli ay horyaalka uga jirto kaalinta 13-aad,iyadoo leh 15-dhibcood.
Kooxda Genoa ayaa soo gashay kaalinta sedaxaad ee horyaalka talyaaniga,ka dib markii ay garoonkeeda Luigi Ferraris 1-0 uga badisay kooxda AC Milan.
Ciyaaryahan Luca Antonelli ayaa qeybtii hore ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Genoa.
Ciyaaryahan Luca Antonelli ayaa waxaa ku soo jeeda indhaha kooxaha ka ciyaarta dalka ingiriiska,gaar ahaan kooxda Liverpool,isagoo sheegay in ay ahaan lahayd riyo u rumowday hadii uu ku biiri lahaa kooxdasi.
Waa guul daradii sedaxaad ee horyaalka talyaaniga kala soo gudbdoonaato kooxda AC Milan.
Kooxda Genoa ayaa kaalinta sedaxaad ka soo gashay kala horeynta horyaalka talyaaniga,waxana ay leedahay 26-dhibcood,halka kooxda AC Milan ay horyaalka uga jirto kaalinta todobaad,iyadoo leh 21-dhibcood.
Kooxda Parma ayaa waxaa garoonkeeda Ennio Tardini 1-2 uga badiyay kooxda Lazio.
Kooxda Parma ayaa goolka ku hor martay,waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Raffaele Palladino.
Kooxda Lazio ayaa waxaa labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Stefano Mauri iyo Felipe Anderson.
Kooxda Lazio ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 23-dhibcood,halka kooxda Parma ay ugu hooseyso horyaalka talyaaniga,iyadoo leh lix dhibcood oo kaliya.
Aqoon isweydaarsi ku saabsan horumarinta gobolka Hiiraan oo Beladweyne ka furmay
West Ham oo Soo Gashay Kaalinta Afaraad ee Horyaalka Ingiriiska “SAWIRRO”